Iro zano rekudyara rinochinja nemamiriro azvino | Ehupfumi Zvemari
Chinja zano rekudyara nemamiriro azvino
Kana paine chengetedzo ine chinzvimbo chekutenga, hachisi chimwe kunze kwekambani yemafuta yenyika Repsol. Kunyanya, nekuda kwerubatsiro rwunopihwa nekukwira kwemutengo wemafuta, uri parizvino pamusoro pechidziviso che $ 80 dhiramu. Kunyangwe ichi chiitiko chichigona kuputswa pane imwe nguva kana imwe sezvo pasina chisingaperi uye ndoda kukwira kuri mumisika yemari. Chero zvazvingaitika, zvikamu zveRepsol ndeimwe yeakaongororwa zvakanyanya nevanoongorora zvemari vane mukurumbira.
Ehe, pane yakajeka mune yeSpanish stock stock uye zviri chaizvo kuti Repsol ndeimwe yemashoma masheya ayo anoratidza yakajeka kutenga kwekumanikidza. Uye zvechokwadi, pamusoro pezvimwe zvirevo zvinoumba indekisi inosarudzika yemabhizimusi emunyika, Ibex 35. Kusvika pakukwanisa kweiyi kambani yemafuta yakanyorwa romper kuramba yakakosha kupfuura simba rakaumbwa kubvira 2007. Nekugona kupukunyuka uye yakasimba tsika, seimwe yeakanyanya maficha kubva padanho rekuona kwehunyanzvi kuongorora.
Mutengo wemugove unogona kuenda zvakatowanda zvichienderana nekuti iri kupi enda zvakanyanya mutengo wezvisina kuchena. Hazvishamise kuti ichi chichava imwe yemakiyi ako akakosha kuona kuti zvichachinja sei mumisika yemari kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti ichokwadi kuti yakagadzira yakakosha yekumhanyisa kumhanya kubvira Repsol yakatengesa yakatenderedza 13 euros pamugove. Asi kana ichinge yatyora kuramba pamberi, chero chinhu chinogona kuitika uye nekudaro iwe unofanirwa kunyatsoteerera kune zvinoitika neiyi inoenderana nemusika wemasheya ukoshi.
1 Repsol: mukupisa kwemafuta
2 Chinhu chiri kuwedzera
3 Zvishoma goho pazvipenga zvisungo
4 Kuongorora chikamu chebhengi
5 Dzokera kune zvakajairwa zvigadzirwa
6 Matipi okusafa uchiedza
Repsol: mukupisa kwemafuta
Mushure mekuwedzera kwaKurume apfuura, inotevera inotarisirwa munaJune uye imwe yekuwedzera mu4Q18 (yakazara 3 kuwedzera kwe + 25 hwaro hwenongedzo muna 2018). Mushure mekukwira kwazvino kwemutengo wemafuta asina kugadzirwa, musika unotanga kudzikira chikamu chechina chekukwira muna 2018. Ichi chiitiko chakabatana chinotsigira shanduko yegoridhe dema kwemavhiki mashoma apfuura. Kunyangwe kiyi iri mune kuti maitiro aya acharamba achienderera kubva ikozvino zvichienda mberi. Kana kana zvakapesana, pachave neshanduko mune zvinoitika zvinogona kukanganisa ako marongero ekudyara.
Kune rimwe divi, zvinoshamisa kwazvo kuti kukwira kwemutengo wemafuta nemafuta zvinosvika yakakwira nhanho kubva 2014. Pasi rose, mutengo wemafuta asina kuchena unoramba uchikwira, nekuda kwekutya kudonha kwekuwanika kwepasirese nekuda kwezvirango zveUS kuIran uye nekukwanisa kudzikisira kupihwa kubva kuVenezuela. Mupfungwa iyi, iwo mukana unovhurika kwauri kuitira kuti iwe ugone kuita purofiti inobatsira kubva panguva dzino chaidzo.
Chinhu chiri kuwedzera
Chero zvazvingaitika, haugone kukanganwa kuti goridhe nhema nderimwe remashoma emari midziyo iri mu zvakajeka bullish muitiro. Uye izvo kubva pachinzvimbo ichi zvinokukoka iwe kuti uvhure zvinzvimbo mumakambani emafuta, akadai seRepsol. Mupfungwa iyi, mafuta eBrent ekuendesa muna Chikunguru akavhara Chitatu ichi mumusika weLondon mune ramangwana pamadhora mazana manomwe nemakumi masere nesere nemapfumbamwe emadhora, 79,81% kupfuura pakuvhara kwechikamu chakapfuura.
Kune rimwe divi, yeEuropean crude yakanyoreswa kuwedzera kushoma mushure mekunge zvazivikanwa kuti matura eUS akawedzera svondo rapfuura nemabhiriyoni emamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu, kusvika pamamirioni mazana mana nemakumi masere neshanu, nepo nyanzvi dzakatarisira kudonha kwemabhirioni 5,8. Kubva pane ino mamiriro, hazvishamise kuti vazhinji vashoma uye vepakati varimari vafunga kuvhura nzvimbo muRapsol. Mamiriro ezvinhu aripo anokurudzira kusimudzirwa kwesarudzo idzi kuti kuvhurwe mumaforamu evashambadzi vadiki nepakati. Munguva pfupi ye kusava nechokwadi kukuru pachikamu chemisika yemari kusiyanisa mari. Muchokwadi chinopinda munzvimbo dzekutenga panguva ino zvine chekuita nekambani iyi yakanyorwa paIbex 35.
Zvishoma goho pazvipenga zvisungo
Kunze kwekunge paine kukanganisika kukuru kwechiitiko ichi munyika yakavakidzana, zviri pachena kuti chisungo chemupendero. Kwete izvozvo chete kubva Italia, asiwo kubva kuSpain, Greece kana kunyange Portugal. Hazvishamise kuti mazuva ano ivo vaona zvinopfuura kukosha kwakakosha kubvisa kubva mukutenga. Nekuti ivo havaise chivimbo pachikamu chevarimi. Kuti chero zvodii, vanosarudza chisungo cheGerman sechirevo chekuchengetedza kuitira kuti kuchengetedza kwavo kubatsire kubva ikozvino. Izvo hazvigone kukanganwika kuti iyo-yemakore-gumi eGerman bund ndiyo utiziro hwevanoponesa mune zviitiko pamwe nekusahadzika kukuru. Sezvo zvingangodaro zvirizvo izvi zvatiri kuongorora muchinyorwa chino.
Ehezve, mumazuva ano kana vhiki idzi hauzove nesarudzo kunze kwekutiza kubva kune zvakasungwa zvisungo kuti uchengetedze capital yako uine zvimwe zvivimbiso zvekubudirira. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti pane mari yakawanda yaunogona kuzvisiira panzira kana ukasarudza rudzi urwu rwemari mune yakatarwa mari. Zvirinani kuti iwe ugoenda kuma equity uine chenjedzo sezvo parizvino iri mari yakachengeteka kwazvo kupfuura ino kirasi yezvisungo chaizvo.
Kuongorora chikamu chebhengi
Mukati memakambani, kune chikamu chakanyanya kutarisisa kune zviri kuitika muItari kubva kune yezvematongerwo enyika maonero. Uye zvechokwadi haisi imwe kunze kwenzvimbo yemari neyemabhengi sezvo iri iro rakanyanya kubatwa munzvimbo ye bearish nemisika yemasheya. Hazvishamise kuti zvido zvemabhangi eSpain muItaly akasimba kwazvo uye hazvishamise kuti mazuva ano varasikirwa nemari yakawanda muzvinzvimbo zvavo. Nenjodzi iyo inodonha inogona kuve yakaoma mumazuva anotevera. Nekudaro kuti iwe usanyudzwa mune zvisingafadzi zviitiko zveako zvido zvako, sarudzo yakanakisa ichave yekusatora chinzvimbo mune chero bhangi. Zvirinani izvozvi uye kusvikira matanho ekutanga ehurumende nyowani yeItaly aoneswa.
Ino ingave iri nguva chaiyo yekuchinjisa ako ekuchengetedza mapotifoliyo. Kubva pazvinzvimbo zvemabhangi kune mamwe akanyorwa anozoshandisa imwe nzira yekudzivirira mumamiriro ekunze mumisika yemari. Ehezve, ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekufamba nemamiriro ezvinhu aya achibatanidzwa kubva kuemaquities. Pasina kufanira kusiya misika yezvemari kune zvinogona kuitika muItari kubva zvino zvichienda mberi.
Dzokera kune zvakajairwa zvigadzirwa
Imwe mhinduro kuitira kuti iwe urege kuwana kushamisika kusinganzwisisike mune inotevera kunobva mukukwanisa kunyorera kune emabhangi zvigadzirwa zveupenyu hwese. Ehezve, zviwanikwa hazvizove zvakakosha zvakanyanya, kure nazvo. Asi zvirinani zvinokubatsira kuti usarasikirwe neyuro euro mukati memwedzi iyi inotambudza kubva mugirandi rerunyararo muItari. Kusvika padanho iro raanogona kuve yekudyara inonzi zambuko rinozoshanda kusevha mari kudzamara mamiriro ezvinhu emisika yemari agadzikana. Izvi zvinogona kutora mavhiki mashoma kana, zvinopesana, zvinogona kugara kwenguva refu.
Chero zvazvingaitika, zvichave zvakaoma kwazvo kuti iwe upfuure mazinga ekubatsira ari pamusoro pe1%. Asi nekugutsikana kuti iwe uchazoshandisa aya anotevera mazororo nenzira yakadzikama uye isina kukwana nezve izvo zvinogona kuitika kune inogara yakaoma nyika mari. Ehezve, pane zvishoma zvaunogona kuwana kubva nhasi nekushandisa kweiri zano mukudyara saka rakashamisa uye rinodzivirira panguva imwe chete. Usakanganwe sechiitiko chinogoneka kuti kuchengetedza kwako kubatsire kubva ikozvino.
Matipi okusafa uchiedza
Saka kuti iwe usave nechero dambudziko nehutarisiro hwemari yako, hapana zvirinani pane kuteedzera akateedzana ezano ekurudziro ayo anogona kubatsira zvakanyanya mune azvino mamiriro. Pakati pazvo pane zvinotevera zvatinofumura pazasi. Nekuti inogona kukubatsira iwe kuita mabasa anobatsira mumisika yemari.
Iva nekuchenjerera zvakanyanya kupfuura mune dzimwe nguva dzegore, uko sarudzo dzako dzinofanirwa kuitiswa nedhivhosi yakakura yekuratidzira.
Kwete nekuda kwekuchengetedza zvakanyanya iwe unofanirwa kusarudza iyo yakamisirwa mari sezvo iyi sarudzo mune yekudyara inogona kuunza njodzi dzakawanda kupfuura mukusiyana.
Inogona kuve chikonzero chakanakisa chekuzorora zvishoma uye nenzira iyi tora mukana wemwedzi yezhizha kuti unakirwe neyaunofarira mahobi.
Ino haisi nguva yekutora njodzi, zvese maererano nemari yakatarwa uye inoshanduka uye izvi hazvifanirwe kukanganikwa panguva ino.
Senguva dzose, uchave zvakare mukana wakanaka kwauri kuti uwane mikana yechokwadi yebhizinesi iyo pasina mubvunzo ichazobuda mumazuva ano. Mune zvimwe zvezviitiko ivo vanotova simba chairo nekusimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chinja zano rekudyara nemamiriro azvino
Chinese mobiles vanowana mugove wemusika kuSpain